सँगै घरमा एक बिल्ली को बच्चा संग मात्र होइन आनन्द, तर पनि बिरालो मूत्र को गन्ध को समस्या आउँछ। आखिर, कहिलेकाहीं हाम्रो मनपर्ने एक विशेष यस ट्रे, र गलीचे, फर्नीचर, laminate फर्श र यति मा लागि छुट्याइयो हिंड्न थाल्छ। बिरालो मूत्र उत्पादन को गन्ध? यो हाम्रो आजको लेख को एक विषय छ।
हामी merits मा कुराकानी सुरु गर्नु अघि, यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा बिरालोहरु दण्ड कि अत्यधिक खराब छ! जूता तपाईं naprudil पाल्तु जनावर निराश आहत ... तपाईं दोषी छन् र हुनेछ! अब जनावर यस्तो व्यवहार लागि कारण कुरा गरौं र deduce भन्दा सिक्न बिरालो को गन्ध मूत्र।
कारण बिरालो किन कहीं shitting
पहिलो तपाईं पहिचान गर्न आवश्यक छ "सबै दुष्ट को मूल।" यो समस्या बिरालो ट्रे गरिबी धोए (वा दुर्लभ परिवर्तन) को परिणाम हुन सक्छ।
केही अवस्थामा, बस प्रयोग कन्टेनर बन्नेछ आफ्नो पाल्तु जनावर रूपमा एक सानो बिरालो बढ्न tends। यस मामला मा, यो हिंड्न असहज हुन्छ। यो भूल छैन!
बिरालोहरु अनुपयुक्त ठाउँमा urinate किन थप गम्भीर कारण एक स्वास्थ्य समस्या वा कुनै पनि तनावपूर्ण अवस्था हुन सक्छ। कि यो पनि अधिक र फेरि naprudil डराएका किनभने यो एउटा पशु दुरुपयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ किन छैन!
थैली समस्या र असंयम पनि पशु को यो व्यवहार गर्न सक्छ। अब अन्तमा, गरेको पत्ता गरौं के बिरालो मूत्र उत्पादन को गन्ध।
बिरालो गंध लागि घर उपचार
यस हामीलाई उद्धार गरेको छ जो सुन्दर oxidizing एजेन्ट मूत्र को अप्रिय गंध -, पाठ्यक्रम, कागति को रस ध्यान छ। हामी स्पन्जले यसलाई squeeze र (ओछ्यानमा, उदाहरणका लागि) एक ठाउँ भिजेको SPOILED आफ्नो बिरालो गर्न आवश्यक छ।
तपाईं सिरका समाधान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि एक उत्कृष्ट oxidizer छ। उहाँले धेरै चाँडै उहाँलाई र बिरालो गन्ध संग लिएर, तिनीहरूलाई जाम सतह संग गायब।
बिरालो मूत्र को गन्ध कसरी धुन? निस्सन्देह, यो पोटासियम Permanganate समाधान! यो सबैभन्दा चिरपरिचित र सिद्ध घर उपाय समय छ। पोटासियम Permanganate - एकदम शक्तिशाली oxidant र निस्संक्रामक छ। आफ्नो खराब पाल्तु जनावर ठाउँमा समाधान लागू र यो सुक्खा गरौं। गंध पूर्ण गएको छ सम्म प्रक्रिया, तब सम्म दोहोर्याइएको छ।
विशेष विरोधी गंध बिरालो
घर तरिका बाट अलग, त्यहाँ पेशेवर उपकरण हो, प्रभावकारी घरमा बिरालो मूत्र को गन्ध deduce के को समस्या समाधान गर्न। कुनै पनि पशु चिकित्सा क्लिनिक वा एक स्टोरमा मा जानुहोस् र आफ्नो तयारी सम्बन्धी सल्लाह प्राप्त। बिरालो odors मास्किंग, untested उपकरण खबरदार, तर तिनीहरूलाई हटाउनुहोस् छैन!
बिरालो को गन्ध विरुद्ध गैर-घातक हतियार को विकल्प
तपाईं आफ्नो रुचि बारेमा निश्चित हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई यो गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यहाँ एक सुन्दर व्यावसायिक लिक्विडेटर "DezoSan" भनिन्छ बिरालो मूत्र को गन्ध छ। यो राम्रो तरिकाले घरेलू बजार मा नै स्थापित छ। कुनै कम प्रभावकारी र "ZooSan", "जैव-फा", "Zoovorsin" र अरूलाई जस्तै हालतमा साबित गरेको छ। खैर, यी लागूऔषधको सबै राम्रो अयोग्य र बिरालो ट्रे को प्रक्रिया संग छन्।
मछलीघर मा घोंघे उन्मुक्ति कसरी: सबै चलिरहेको प्रक्रियाहरू
कुकुर को खोप
बारबेक्यू को लागि डाकू: फोटो ठान्नुहुन्छ। कसरी आफ्नै हातले बारबेक्यू को लागि एक हुड बनाउन
"भाप" बाट फोन अनटाइ गर्ने विवरणहरू
यामाहा Majesty 400: निर्दिष्टीकरण
Herno ज्याकेट - महिला र पुरुष को लागि एक महान विकल्प